sal-dhigida network Daabacaadda iyo shaqo - Shiinaha ChangZhou Plet Daabacaadda
sal-dhigida network Daabacaadda iyo shaqo
Dhibcaha ee daabacaadda ka ciyaaraan door aad u muhiim ah. Dhibco lagu wareejiyo kartaa gradations, heerarka, iyo midabada image ah. shakhi kasta ama idaacadaha ka kooban yihiin qayb ka Midabka ama qayb ka oo lacag ah si ay u sameeyaan cod ubaxu joogto ah. Tani midab ubaxu iyo lakabka waa in la sawiro ama habab kale si ay qeybta image galay dhibco waaweyn iyo kuwo yaryar.
Dhibco yihiin qaybta ugu aasaasiga ah ee naqshadeynta on saxanka, oo waxay mas'uul ka tarmo ee codadka ee asalka ah, madaxda ururka, iyo dulmar ee image ku jira. Sida laga soo xigtay mabda'a of network, waxaa loo qaybin karaa laba nooc oo ah shabakad Ilodanimada-modulating iyo network noqnoqoshada-modulating. hore ayaa loo. Isticmaalka hababka kala duwan (screens galaas, screens xiriir, iyo farsamooyinka kala go'idda korantada) gaari karo noocan ah warbaahinta, taas oo la ballaaran loo isticmaali karaa sabab u fudud, si dhakhso ah, oo wanaagsan natiijada ay imaging. Isla mar ahaantaana, dadka sidoo kale si cad u aqoonsan dhiman ay, sida tirtiridda waadaxa ah ee moire, sidaas horumarinta technology daabacaadda, dadkii waxay bilaabeen inay soo noqdaan si nooc kale oo network ay fiiro - warbaahinta network FM.
Fikradda baaritaanka isbedbeddelka inta jeer ee loo soo saaray in muddo ah. Horraantii 1993, Division Agfa iyo Linotype-Jahannamo Corporation rasmi ah u furay technology FM baaritaanka shabakadda. Bishii Agoosto 1993, Founder Shiinaha Beijing University ayaa sidoo kale u horumarsan oo u gaar ah FM technology baaritaanka.
FM technology baaritaanka waa image waxaa la marsiiyey iyo talooyin, ka dib markii processing, iyada oo qalab wax soo saarka marka dhibcood size isla yihiin kala sooc lahayn qaybiyey goobo kala duwan, tirada dhibcaha iyo cufnaanta, in uu yahay, inta jeer ee muuqaalka ah ee barta shabakadda, in faraysaan inaan muujiyo Mugga image iyo madaxda ah hababka farsamo. Sidaa darteed, fineness sanamkii waxay ka dhigan tahay waxaa mar dambe sharaxay by tirada khadadka madow iyo caddaan in centimitir kasta, laakiin waxaa lagu qeexaa by size ee dhibcaha. Marba marka size dhibic ah, sare u saxnimada of image ah in loo soo bandhigi karo. The wanaagsan.
technology ayaa soo saarta images kuwa u dhaw in ay saamaynta sawir. Maadaama uu heer-gaadhista kala duwan ee geedi socodka sawir, waxaa jira kala duwanaan ee lacagta qayb ka cusbo lacag photosensitive isla aagga. Ka dib markii horumarinta, waxaa jira qayb yar oo cusbo lacag ah ee mugga hoos on image ah, oo waxaa jira qayb ka badan oo cusbo lacag at cufnaanta sare, iyo isbedelka cufnaanta waxaa lagu go'aamiyaa tirada Qurub cusbo lacag ah ee gobollada kala duwan. Tani waxay la mid tahay network FM ah, iyo Ilodanimada inayan ka mid ah goobaha AM waa ka duwan yahay. Waxaa loo qeexay size dhibic (in tiro), si ay u ma gaari karo saamaynta ku dhow yahay inuu sawir.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadaha ayaa soo bandhigay qaab-dhismeedka dhibic kala duwan iyo magacyo kala duwan siiyey, sida Agfa ee "Crystal Network", Linotype-Jahannamo ee "Diamond Network", Dainippon Screen ee "RANDOT", iwm Sidaa darteed, tirada iyo goobta dhibco daabacaadda ee image kasta unit deegaanka way kala duwan yihiin, laakiin oo dhan waxaa iska leh baaritaanka FM.
Cabbirka mesh baarista FM waxay ku xiran tahay xal wax soo saarka iyo xuduudaheedu baaritaanka. Tusaale ahaan, haddii xal wax soo saarka waa 2400 dpi, iyo dhimaya baaritaanka waa 2 × 2 dhibcood laser sida dhibic shabakad, dhexroor screen waa 21 μm; beegyada uu baaritaanku waa Iyadoo 3 × 3 dhibcood laser sida dhibic, dhexroor dhibic waa 32 μm.
In geeddi-socodka oo dhan, factor ugu muhiim yahay diinta iyo sixitaanka ee network FM ah. core waa in ay doortaan nasiibka iyo laser dhexroor ku jirase aad ku habboon. The cusub ahbaa dhibcood network FM waa macaan oo adag, uniform in size, oo ay baro nuurka go'doon yar, taas oo ah furaha si loo xakameeyo oo tayo leh. The dhergiyey cusub mashiinka alfabeetada shuruudan. dhexroor dogob laser The waxbaa laga beddeli karaa sida ay size dhibic ah. Intaa waxaa dheer, si ay u wada shaqeeyaan geedi socodka soo socda, dareenka waa in sidoo kale la siiyo doorashada faa'iido dhibic, taas oo guud ahaan la kaantarooli karaa gudahood kala duwan ee 5%. Waxa intaa dheer in kor ku xusan, ee sawirrada sawiro waa in la maydhay fiiro gaar ah u heerkulka, xawaaraha, iyo qiimaha pH, iyo waa in ay la maydhay-xawaaraha sare stamps kulul si loo hubiyo tayada fikradaha. In la eego daabacaadda, ay sabab u tahay xaqiiqda ah in uu jiro xad u lahayn in ay xagal screen in isbedbeddelka soo noqnoqoshada, saxnaanta overprinting qalabka waa halkii uu hooseeyo, iyo Daac midabka in waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa sidoo kale waa la aqbali karo.